Wasiirka Cusub ee Arrimaha Dibada Somaliland oo bilaabay dhaq dhaq Diblumaasiyeed oo culus | Somaliland Mirror
Home WARARKA Wasiirka Cusub ee Arrimaha Dibada Somaliland oo bilaabay dhaq dhaq Diblumaasiyeed oo culus
Wasiirka Cusub ee Arrimaha Dibada Somaliland oo bilaabay dhaq dhaq Diblumaasiyeed oo culus
adminDec 07, 2018WARARKA0
Hargaysa (Somalilandmirror.com)- ka dib magacaabidii Wasiirka cusub ee Arrimaha Dibada Mudane Yaasin Xaji Maxamuud Xiir Faratoon, xukuumada Somaliland ayaa bilawday dhaq dhaq Diblumaasiyeed oo culus oo ku socda xawaare aad u sareeya.
Wasiirka ayaa isla markii uu xilka la wareegay shaqada bilaabay isaga oo aan nasan, oo markiiba hore ka galay hawlihii shaqadiisa.
Wasiirka ayaa markiiba u baxay dalka kenya oo uu halkaa ku gudoomiyay wafdigii Somaliland ee ka qayb galay shir balaadhan oo safaarada Somaliland ee Kenya ku qabatay Nairobi.
shirkaas oo loogu talagalay dhiiri galinta maalgashiga iyo ganacsiga u dhaxeeya Somaliland iyo dawlada Kenya, islamarkaana xidhiidhka siyaasi ee labada dalna kor loogu qaadayay.
shirkaas ayaa waxaa si wayn uga soo qayb galay madaxada dawlada kenya heer Wasiir, xildhibaano ,ganacsato iyo shirkado badan oo aad usoo dhaweeyay fursadaha maalgashii ee ay Somaliland soo bandhigtay.
socdaalkaa Wasiirka arrimaha Dibada Somaliland iyo wafdigii kale ee reer Somaliland waxa wax yar ka horeeyay in Somaliland ay ka furatay Kenya Xafiiskeedii ugu wayna caalamka kaas oo uu kasoo shaqeeyay Safiirka cusub ee Somaliland u qaabilsan Kenya mudane Baashe Cawil.
Wasiir Faratoon ayaa kulamadii uu Kenya ku galay guula waawayn kasoo hooyay , islamarkaana wada shaqayntii iyo xidhiidhkii Diblumaasiyeed ee Somaliland iyo Kenya ku guulaystay inuu kor u qaado isaga oo la kaashanaya safaarada Somaliland ee Kenya.
Wasiir Faratoon ayaa markii uu booqashadii Kenya dhameeyay, isla markiiba toos ugu duulay dalka Maraykanka, halkaas oo uu ka bilaabay Safar shaqo uu kula kulmayo madax ka tirsan dawlada Maraykanka , iyo xildhibaano labada aqal ee Maraykanka congress ka iyo Senat ka ba.
waxa kale uu wasiir Faratoon la kulmaya ha’yadaha Maraykanka u qaabilsan caawimada wadanda soo koraya .
safarka wasiir Faratoon ee Maraykanka ayaa ku soo beegmaya yadoo ayaamo yar ka hor ay dawlada Maraykanku go’aan ku gaadhay in safaaradeedii Somalia u qaabilsanyad ee magaalada Muqdisho ku taalay dib ugu rarto shaqaalihii oo Kenya fadhiyi jiray.
Dawlada Maraykanka ayaa wakhtigan xaaliga ah ku jirta diyaarinta iyo isku dabaridka siyaasadeeda ku wajahan guud ahaan qaarada Afrika, gaar ahaana geeska Afrika.
Wasiir Faratoon ayaa dardar galiyay siyaassdii arrimaha Dibada ee Somaliland islamarkaana diblumaasiyada Somaliland ayaa durba ka muuqatay maxfalada caalamiga ah.
Wasiir Faratoon ayaa waxa uu xilka la wareegay yadoo qorsha sanadeedkii iyo sanad miisaaniyeedkii dhaafay , taas daraadeed oo laga yaabo in uu si buuxda u fulin kari waayo qorshayaashiisa oo ay caqabad ku keento, laakin Xukuumada Somaliland ayaa laga filayaa inuu taageera buuxda iyo hiil dhinac walba ah ka helo.
Previous PostQorshaha Ismaaciil Cumar Geelle Iyo Cumar Al Bashiir U Tagayaan Addis Ababa Oo La Shaaciyay Next PostDaawo:Xukumada Somaliland Oo Dawlada Somaliya Ku Eedaysay Inay Carqaladayso Nabadgelyada Somaliland.